Vaovao - Orinasa tompon'andraikitra ara-tsosialy—KALE FANS
Orinasa tompon'andraikitra ara-tsosialy—KALE FANS
Tamin'ny 20 Jolay, niharan'ny rotsak'orana be dia be i Henan, niteraka fatiantoka be sy fatiantoka ho an'ny tanàna maro. Ny loza dia nahatonga ny fampiatoana ny fiasan'ny metro ary nisy fiantraikany mafy tamin'ny fitaterana lalamby, lalambe ary fiaramanidina sivily. Kale Environment dia mandinika ny loza tao Henan. Ny filoha Lu Xiaobo dia manome lanja lehibe izany ary mandamina ny asa fanomezana ho an'i Henan. Tamin'ny 23 Jolay, notarihin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Kale Environment Henan, kamiao mpitatitra roa nitondra kojakoja velona 2000 baoritra no nitondra ny iraka ho an'ny olona Kale rehetra mba handresena ireo fahasahiranana isan-karazany ary tonga tao an-tanànan'i Jiaozuo. Nandefa fanampiana ny vahoaka.
Tamin'ny 24 Jolay, nanao fitetezam-paritra mafy nanamorona ny morontsirak'i Zhejiang ny rivo-doza "Fireworks". Ny Komandin'ny Fisorohana sy Fanaraha-maso ny Faritanin'i Zhejiang dia nanavao ny valin'ny vonjy taitra tamin'ny rivo-doza ho amin'ny haavo I. Araka ny vinavinan'ny Observatory Meteorolojika, misy fiatraikany lava sy rotsak'orana miangona ny rivo-doza. Mety hisy rotsak'orana be loatra any amin'ny faritra sasany, ary avo dia avo ny loza ateraky ny loza faharoa toy ny riaka tendrombohitra, fihotsahan'ny fotaka ary an-tanàn-dehibe.
Ny Biraon'ny Fitantanana vonjy taitra Haining dia nanomboka haingana ny valin'ny Ambaratonga I momba ny loza. Ny Komitin'ny Fitantanana ny Jianshan ao Haining dia nanangana fialofana vonjimaika ao amin'ny Jianshan Science and Technology Park mba hanomezana fialofana vonjy maika ho an'ny mpiasa ao amin'ny trano fialofana vonjimaika eo am-pananganana ao an-tanàna, ireo mpiasan'ny tanàna sy tanàna iva, ary ireo zokiolona mipetraka irery. . Na izany aza, ny toerana vonjimaika dia tsotra ary tsy misy ventilation sy coolant, ary mando sy mafana ny ao anatiny. Taorian'ny nahalalan'i Kale momba ny toe-javatra mifandraika amin'izany, dia nanolotra mpankafy avy hatrany izahay ho an'ny Komitin'ny Fitantanana ny Distrikan'i Jianshan Vaovao, Tanànan'i Haining.
Kale dia nitondra mpankafy Airmove miisa 6 ho any amin'ny faritra fialokalofana ao amin'ny Distrikan'i Jianshan amin'ny hafainganam-pandeha haingana indrindra. Ny mpankafy Kale dia nanatsara ny tontolo feno hatsembohana tao amin'ny fialofana, ary niaraka tamin'ireo nafindra toerana mba hanohitra ny rivo-doza! “Manoloana ny loza voajanahary, kely dia kely ny vitan’ny orinasa, fa izahay rehetra ao amin’ny Kale dia vonona hiaro ny tranonay amin’ny ezaka kely ataonay.